Njodzi dzehutano dzezvinotapira zvekugadzira | Bezzia
Njodzi dzehutano dzezvinotapira zvekugadzira
Chokwadi pane kanopfuura kamwechete wakambonzwa kuti zvekugadzira zvinotapira hazvina hutano. Nokuti kwenguva refu pane kutaura pamusoro migumisiro yakaipa yezvigadzirwa zvehutano izvi. Zvisinei, pasi pechirevo chokuti saccharin iri nani pane shuga, inoramba ichidyiwa pasina kufunga nezvekuipa kwechigadzirwa ichi chakajairika.
Panguva ino apo chikafu chinenge chanyatsotariswa, umo vanhu vakawanda vari kudzidza kuverenga uye kududzira zvinyorwa zvezvigadzirwa kuti varase zvinokuvadza zvakanyanya, wadii kudzidza uye kuwana zvakawanda nezve njodzi yezvinhu izvo a priori zvingaita sezvisingakuvadzi? Kana iwe uri mumwe weavo vanonwa kofi uye infusions ne sweeteners, tinokukoka iwe kuti uwane njodzi dzehutano dzekushandiswa kwayo.
1 Zvinotapira zvine njodzi kune hutano here?
1.1 Nzira yekutsiva shuga nenzira ine hutano
Zvinotapira zvine njodzi kune hutano here?
Zvinoenderana nezvidzidzo zvakaitwa, kuenderera mberi kunwiwa kwezvinotapira zvekugadzira inogona kukuvadza hutano hwemudumbu hutachiona hwatinahwo mumuviri. Aya mabhakitiriya chikamu chemukati memicrobiota uye ane basa mukushanda kwemuviri. Kana chimwe chinhu chikavavhiringidza, mabhakitiriya ane utano anogona kurwara uye kuva nengozi kune utano.
Izvi ndizvo zvinotemesa chidzidzo pamashandisirwo ezvinotapira zvekugadzira. Kunyanya, vanogona kushandura marudzi maviri emabhakitiriya emudumbu, E-coli uye E-faecalis. Sezviri pachena zvikamu zvezvimwe zvinotapira zvekugadzira inogona kuchinja huwandu hwehutachiona hwakataurwa kana kuburitsa imwe mhando iyo inogona kushandura kuumbwa kwechisikigo kweiyo intestinal microbiota.
Nekuda kweizvozvo, mabhakitiriya aya anogona kukuvadza madziro emukati, kupfuura nekwauri uye kusvika muropa. Aya mabhakitiriya ane chirwere anogona kugara uye kuungana munzvimbo dzakadai lymph nodes, spleen kana chiropa uye migumisiro inogona kuva nengozi zvikuru. Pakati pemamwe matambudziko, marudzi ese ehutachiona anogona kuitika, kusanganisira imwe yenjodzi, septicemia.
Nzira yekutsiva shuga nenzira ine hutano
Paunoshandisa artificial sweetener, imhaka yekuti iwe unoda kuderedza kudya kwako shuga. Pamwe sechikamu chekudya kwekuonda kana senzira ine hutano yekudya. Vanotozivikanwa ngozi dzeshuga uye kupindwa muropa kwayo, asi zvishoma nezvishoma vanotanga tsvaga njodzi dzezvigadzirwa zvekugadzira zvakaita sezvinotapira. Naizvozvo, zviri nani kutsvaga dzimwe nzira dzekutapira chikafu nezvigadzirwa zvisina ngozi kune hutano.
Muenzaniso wechisikigo chinotapira izuva. Chibereko chine huwandu hwakakura hwehuga hwechisikigo hwakakwana pakutapira zvepamusha dhizeti uye masiwiti pasina kushandisa shuga. Izvo zvinokanganisa zvemazuva ndezvekuti shuga yavo yakakwira inovaita chikafu che caloric. Saka kana iwe uri kutsvaga kuderedza uremu unofanirwa kuvapedza zvine mwero.
Kutapira kofi kana infusions, unogona kushandisa zvakanakisa zvechisikigo zvinotapira, seuchi kana agave syrup. Kunyangwe ivo variwo chaizvo caloric, se shoma shoma inokwana kutapira girazi harifanirwe kuva nedambudziko rakawandisa, kunze kwekunge wapfuura mukushandisa. Kana zviri zvekugadzira zvinotapira, hazvisi zvese zvine ngozi zvakaenzana.
Pakati pezvakanakisa sarudzo ndeye stevia iyo inobva mumiti, saka ndeyechisikigo, kana erythritol. Ichi chinotapira chinotapira chinobva kune zvakawanda zvekudya zvakaita sechibage kana howa, pakati pezvimwe. Mune chero ipi zvayo, sarudzo yakanakisisa nguva dzose ndeyekusarudza chinotapira chechisikigo kuti udzivise mishonga yemakemikari inokuvadza kune hutano.
Chekupedzisira, yeuka kuti shuga haisi chimwe chinhu kunze kwechinhu chinoshandiswa kuvharidzira kuravira kwechikafu. Dzidza kunakidzwa nerunako rwechisikigo rwezvigadzirwa zvinowanzovanzwa pakati pehuwandu hukuru hweshuga uye uchaona kuti muromo wako unojaira zvishoma nezvishoma ivo. Munguva pfupi iwe uchanakidzwa nezvimwe zvakawanda zvinonaka uye nazvo iwe uchakwanisa kudya zvine hutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Nutrition » Njodzi dzehutano dzezvinotapira zvekugadzira
Ndeapi maitiro ane vaviri vasingafari?
Bulgarian squats uye mabhenefiti avo